Green Home အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းသည် ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။အများဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးနေသော မြို့ နယ်များအနေဖြင့် ကျောက်တံတားမြို့ နယ် ၊ပုစွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်နှင့် လှိုင်မြို့ နယ်တို့...
Royal Sayarsan Condominium ၏ အရောင်းပိုင်း တာဝန်ယူထားသော Minzin Agency မှ ကိုကျော်မင်းဇင်နှင့် အင်တာဗျုး...
Royal Sayarsan Condominium တွင် တစ်ပေပတ်လည် ဈေးနှုန်းများကို အမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြင့် ခွဲခြားထားပြီး ပထမတစ်မျိုးမှာ Discount မပေးမီကို သုံးသိန်းသုံးသောင်းမှ သုံးသိန်းရှစ်သောင်း အထိရှိပြီး Discount ဈေးနှုန်းများ သိလိုပါကဖုန်းဆက်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း...
Royal Sayarsan Condominium ၏ အရောင်းပိုင်း တာဝန်ယူထားသော Minzin Agency မှ ကိုကျော်မင်းဇင်နှင့် အင်တာဗျုး
Minzin Agency အနေဖြင့် Royal Sayarsan Condo သည် နေရကောင်းတွင် တည်ရှိခြင်း၊ အရှုပ်အရှင်း ကင်းရှင်းပြီး တစ်ဦးတည်းပိုင်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်သောကြောင့် တာဝန်ယူဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုကွန်ဒိုတွင် အထပ်ပေါင်း ၂၄ထပ်ရှိပြီး အခန်းပေါင်း...
“The Illustra at Phosein” Codominium မှ အရောင်းပိုင်း တာဝန်ရှိသူ မမေဝင့်သူ နှင့် အင်တာဗျူး
“The Illustra at Phosein” Codominium ကို ဖိုးစိန်လမ်းပေါ်တွင်Pyae Sone Win Nang Co.,Ltd မှ တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။The Illustra Project တွင် စုစုပေါင်း(၃၁)ထပ် ပါဝင်ပြီး ပျမ်းမျှအနေဖြင့် Basement တွင် ကားပါကင် တည်ရှိပြီး Ground Floor မှာ Hotel Style Loby ဖြစ်ပြီး ပြင်ပမှလူများ အလွယ်တကူမဝင်နိုင်ရန် Waiting Area ပါဝင်ကြောင်း...
Myatmingalar Codominium ကို အမှတ်(၃၁၃)၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့တွင် Myanmar Seilone Co.,Ltd မှ တည်ဆောက်နေပါသည်။ Myatmingalar Codominiumသည် စုစုပေါင်း(၁၇)ထပ် ပါဝင်ပြီး ပျမ်းမျှအနေဖြင့် Ground Floor(2)ထပ်၊ ပထမ Ground Floor မှာ ကားပါကင်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ Ground Floor မှာ Residence office အနေဖြင့်ထားပေးကြောင်း သိရပါသည်။ Level (1) & (2) မှာ...
Your Property Finder Co.,Ltd မှ Managing Director မမေသူနှင့် အင်တာဗျူး(အပိုင်း-၂)
ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် condominium များ ရေပန်းစားလာပြီး International Standard မှီသော Condominium များမှာ customer များ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို အများဆုံးရရှိလာကြောင်း သိရပါသည်။ထိုသို့ အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုများ တည်ဆောက်လာခြင်းကြောင့် မိမိနေထိုင်သော နေအိမ်အတွင်းမှာပင် Life Style ကို အပြည့်အဝ...
Your Prorerty Finder Co.,Ltd မှ Managing Director မမေသူနှင့် အင်တာဗျူး(အပိုင်း-၁)
Your Prorerty Finder Co.,Ltd ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Your Prorerty Finder Co.,Ltd သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံး Real Estate Agency ဖြစ်သည့် ERA Real Estate ၏ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ဆောက်နေသော Condominium များ၏ Building တစ်ခုလုံးကို တစ်ဦးတည်းသော အရောင်း...
The G.E.M.S Garden Condominium မှ တာဝန်ရှိသူ မလွင်မာအောင်နှင့် အင်တာဗျုး (ဒုတိယပိုင်း)
The G.E.M.S Garden Condominium ကို Capital City ပုံစံ တည်ဆောက် ထားကြောင်းနှင့် ၄င်းကွန်ဒို၏ ၉၅% ကျော်ကို အမျိုးအစား လေးမျိုးဖြင့် ရောင်းချ ပေးနေကြောင်း သိရသည်။နေထိုင်ကြမည့် Customer များ၏ Safety ပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အသေးစိတ်မှ စ၍ စီစဉ်ပေးထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ ၀ယ်ယူထားမှု့နှင့်...
The G.E.M.S Garden Condominium မှ တာဝန်ရှိသူ မလွင်မာအောင်နှင့် အင်တာဗျုး
The G.E.M.S Garden Condominium ဆောက်လုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောကြားရာတွင် အစိုးရသစ်လက်ထက် ရန်ကုန်မြို့တော်အား ချဲ့ထွင်မည့် အစီအစဉ်တွင် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လိုခြင်းကတစ်ကြောင်းနှင့် လက်ရှိတွင် ကွန်ဒို ဆောက်လုပ်နေမှု့များ ရှိသော်လည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသော...
နွေဦးရောင်ခြည် အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ မဇာခြည် နှင့် အင်တာဗျုး
နွေဦးရောင်ခြည် အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင် ခဲ့ ပြီး မုဒိတာ အိမ်ရာ မှ တိုက်ခန်း များကိုသာ အများဆုံးအကျိုးဆောင် ပေးကြောင်း သိရသည် ။ မုဒိတာ အိမ်ရာ မှ တိုက်ခန်း များသည် ယခု ရက်ပိုင်း အတွင်း အရောင်းအဝယ်သွက်နေပြီး...